Easy OS, distro mebere onye okike nke puppy Linux | Site na Linux
Easy OS, nke bu onye okike nke puppy Linux meputara
E kpughere Barry Kauler, onye guzobere Puppy Linux oru ngo na-adịbeghị anya ịhapụ ibuo version nke nkesa Linux gị Dị mfe OS, nke na-abịa na nsụgharị ọhụrụ ya "Mfe Buster 2.2", nke pụtara n'ihi na ị gbalịrị iji akpa iche na Puppy Linux teknụzụ.
Ihe nkesa awade Easy Containers usoro iji malite ngwa ma ọ bụ desktọọpụ niile n'ime akpa dịpụrụ adịpụ. Versiondị Easy Buster na-ewuli na ntọala nke ngwugwu Debian 10. A na-ekesa nkesa ahụ site na usoro nke ndị nhazi ihe eserese nke oru ngo ahụ mepụtara.
Isi atụmatụ by Onyeka Onwenu bụ na e wuru ya site na Debian 10 Buster, na-eji WoofQ (A ndụdụ nke Woof2. Woof-CE bụ ihe ọzọ ndụdụ nke Woof2, na-ewu Puppy Linux).
Ihe dị mkpa site na Easy OS ọ bụ na nwụnye Omenala "zuru" faịlụ sistemu nọ na nkewa zuru oke, na mbụ / wdg, / biini, / usr, / proc, / sys, / tmp, were gabazie.
N'ihe banyere Easy OS ọ na-adịghị arụnyere dị ka nke a. Kemgbe a ejiri a mfe ụdị echichi na draịvụ ike ahụ kọwara a »frugal« mode, nke enyene naanị otu nchekwa na a nkebi, na-enye ya ohere ibikọ ọnụ na ihe ọ bụla ọzọ ejiri mee nkewa.
N'ime njirimara ndị bụ isi nke nkesa ndị dị ịrịba ama maka ndabara ọrụ na mgbọrọgwụ ùgwù, anyị nwere ike ịchọta na:
Etinyere OS dị mfe dị ka otu onye ọrụ Live sistemụ (nhọrọ, ọ ga-ekwe omume ịrụ ọrụ n'okpuru 'ebe' nke onye ọrụ na-enweghị ikike)
A na-arụnye sistemụ na ndekọ ndekọ
Ọ nwere ụdị mmelite nke atomiki nke nkesa (mgbanwe nke ndekọ na-arụ ọrụ na sistemụ) yana nkwado nke mmelite nlọghachi
Ngwa dị ka SeaMonkey, LibreOffice, Inkscape, Gimp, Planner, Grisbi, Osmo, Notecase, Audacious na MPV so na ngwugwu ntọala.
E wezụga ya isi ihe ọzọ site na Easy OS, bụ na e mere ya site ọkọ iji kwado akpa. Ngwa ọ bụla nwere ike ịgba ọsọ na akpa, n'eziokwu desktọọpụ zuru ezu nwere ike ịgba ọsọ na akpa.
Ezubere igbe dị mfe site na ala Docker, LXC, wdg. ejighi ya. Easy Containers bụ kemgwucha oru oma, na ọ fọrọ nke nta ọ bụla na-efefe: isi size nke ọ bụla akpa bụ naanị ọtụtụ KB.
Ihe nkesa na-akwado SFS mega-packages, nke ọtụtụ nchịkọta agbakọta n'ime otu faịlụ, nke akpọrọ ya na ndọtị ".sfs". A naghị ewepụta ihe ndị a, mgbe eji ha eme ihe, a na-etinye ha na machie ma ọ bụ na-ekpuchi faịlụ sistemụ, enwere ike iwepu ha site na iwepu ha. Nchịkọta ndị a nwere ihe niile ịchọrọ iji chịkọta ma mezie. Enwekwara isi iyi nke SFS na ihe ndi ozo.
Easy Buster 2.2 na-akwado ntọala mmekọrịta Debian 10.2 yana nke jikọtara Linux kernel 5.4.6 y ya na njiri LockDown gbanyere na-amachi ohere esịtidem kernel mmiri site na mgbọrọgwụ mgbe na-arụ ọrụ a oyiri mode nke a nnọkọ na ebe nchekwa.
Ihe mejupụtara gụnyere Ngwa ọhụrụ pSynclient na SolveSpace. Dị mmegharị nke NetworkManager applet gụnyere. Ngwa BootManager emelitere, SFSget, EasyContainerManager, na EasyVersionControl.
Ibudata ma wụnye Easy OS
Ihe nkesa Ọ dịlarịrị ibudatara ma wụnye ya na kọmputa anyị ma ọ bụ iji nwalee igwe na-emepụta ihe.
Iji nwee ike ime onwe anyị ya anyị ga-ebudata ya na ebe nrụọrụ weebụ ya nke anyị nwere ike ịnweta site na njikọ na-esonụ.
Ihe oyiyi ISO nke sistemụ ahụ anaghị anọchite anya karịa 514 MB nke ejirila ọtụtụ ngwaọrụ.
Enweghị ọzọ, Easy OS bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị na-achọ sistemụ nke ahụ lekwasịrị anya iche iche. Ọ bụ ezie na dịka e kwuru na mbido, sistemu a nọ n'ọnọdụ nnwale wee nwee ike iweta ụfọdụ nsogbu ma ọ bụ nsonaazụ ya na arụmọrụ nke sistemụ ahụ adịghị ka atụ anya ya.
Ha nwekwara nhọrọ iji Easy Pyro nke dị kọmpat na fechaa (438 MB) ọ bụ ezie na Easy Buster nwere ikike ịwụnye ngwugwu ọ bụla site na ebe nchekwa Debian 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Easy OS, nke bu onye okike nke puppy Linux meputara
onye napoleon escobar dijo
Barry a dị ịtụnanya, eso m ya kemgbe mmalite nkịta ya na kọmputa kọmputa ochie m rụrụ ọrụ nke ọma. Ugbu a na Easy ha na-eme ihe ịtụnanya n'ihi debian 10 ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughi na xenial gụnyere ọ bụ ihe ịtụnanya.
Zaghachi napoleon escobar
Ekwenyere m nke ọma. Ọ ga-amasị m ịghọta ihe nwoke a (Barry Kauler) ghọtara ma mee Linux nke Puppy, ọ bụ ezie na ụdị Puppy m na-eji karịrị ezuru m n'oge a.
Achọrọ m ịnwale! .Jpg
Zaghachi Xenom Bv
Disemba 2019: Ihe oma, ihe ojoo na ihe na-adighi nma nke Software efu
Amazon, Apple, Google, na Zigbee chọrọ ịmepụta ụkpụrụ na-emeghe maka ngwaọrụ ụlọ nwere ọgụgụ isi